Kooxda Daacish oo sheegatay Masuuliyadda Werarkii Las Vegas – Radio Daljir
Oktoobar 3, 2017 7:55 b 0
Ururka Daacish ayaa sheegtay Mas’uuliyadda weerarkii ka dhacay magaalada Las vegas ee Dalka Mareykanka,halkaas oo ay ku dhinteen 60 Qof 500 oo kalena lagu dhaawacay.
Daacish waxaa ay sheegatayu in Askari ka tirsan Dowladda Islaamka oo bilo ka hor diinta Islaamka qaatay uu fuliyay weerarkaas,waxaanaay ku baahiyeen Website-ka kooxda ee laa yaqaan AMAQ.
FBI-da Mareykanka ayaa sheegtay in Ninka weerarka geystay uusan wax xiriir ah la lahayn Argagixiso Caalami ah,waxaana ay sheegeen in ay wadaan baaritaan la xiriira sababta ku dhalisay in uu weerarkaas geysto.
Ninka weerarka geystay walaalkii oo lagu magacaabo Eric Paddock,ayaa u sheegay FBI-da in walaalkiis uusan wax xiriir ah la lahayn koox diimeed,ama Ururro kale islamarkaana qoyskooda ay la yaabeen waxa dhacay.
Jamacadda Nairobi ee Dalka Kenya oo Albaabada loo laabay Sabab?